IPX Ratings တွေအကြောင်း အသေးစိပ်ရှင်းပြချက် - PX
IPX Ratings တွေအကြောင်း အသေးစိပ်ရှင်းပြချက်
သင့်အနေနဲ့ Outdoor Speaker ဒါမှမဟုတ် Sport Headphones တွေနဲ့ Earbuds တွေ၀ယ်ဖို့ရှာဖွေနေချိန်မှာ ၀ယ်မယ့် Device ရဲ့ Specification မှာ IPX rating ကိုတွေမိကြမှာပါ။ အခုလက်ရှိ Outdoor speakers ဒါမှမဟုတ် Sports headphones နဲ့ Earbuds အများစုမှာ အနည်းဆုံး IPX4 rating ရှိပြီး တစ်ချို့မှာတော့ IPX7 သို့ IP67 ratings ရှိကြပါတယ်။ ထို Ratings တွေကို မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက် အခုရေးထားတဲ့စာက IP/IPX rating ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို နား‌လည်အောင်ပြုလုပ်ပေးမှာပါ။
IPX Rating ဆိုတာဘာလဲ? ဘာလို့အရေးပါတာရတာလဲ?
IP ဟာ International Protection သို့မဟုတ် Ingress Protection ပဲဖြစ်ပါတယ်။ IP သို့ IPX rating ဟာ ဖုန် ၊ ရေ နှင့် အခြားသော အမှုန်တွေနဲ့ အရည်တွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ Level ကိုဖော်ပြပေးပါတယ်။ IP rating ရဲ့ ယေဘုယျပုံစံကို အောက်ပါအတိုင်းတွေ့ရမှာပါ။ Rating တစ်ခုချင်းဆီမှာ အတိုကောက် IP နဲ့စပြီး သူ့နောက်မှာ နံပါတ် ဒါမှမဟုတ် စာလုံး နှစ်လုံး/သုံးလုံး ပါ၀င်ပါတယ်။ Outdoor Speaker ၊ Sports headphones‌ တွေနဲ့ ရေစိုခံ/ဖုန်ဒဏ်ခံနိုင်တဲ့ ဖုန်းတွေကို ၀ယ်တဲ့အခါ သင့်အနေနဲ့ နံပါတ်နှစ်လုံးပါတဲ့ IP67 သို့မဟုတ် စာလုံးနဲ့ နံပါတ် ပါတဲ့ IPX7 စတဲ့ Rating တွေကိုတွေ့ရမှာပါ။
စာလုံးတစ်ခုဆီတိုင်းနဲ့ နံပါတ်တစ်ခုဆီတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပာယ်တွေရှိကြပြီး ဖုန် ၊ ရေ နဲ့ တစ်ခြားသောအမှုန်တွေနဲ့ အရည်တွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ Level ကို ဖော်ပြပေးပါတယ်။
IP = International Protection or Ingress Protection
X(ပထမဆုံးသော X) = Dust Resistance (ဖုန်ကိုခံနိုင်စွမ်းရှိ) နံပါတ်0ကနေ6သို့မဟုတ် X အထိရှိ
X(ဒုတိယမြောက် X) = Water Resistance (ရေစိုခံ) နံပါတ်0ကနေ9သို့မဟုတ် X အထိရှိ
X(နောက်ဆုံး X) = နောက်ဆက်တွဲ ရွေးစရာ စာလုံးများ ( H,M,S,W)
IP Rating နောက်က ပထမဆုံး သင်္ကေတဟာအစိုင်အခဲ နဲ့ အရာ၀တ္ထုတွေရဲ့ အမှုန်တွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အဆင့်ကို ဖော်ပြပေးပါတယ်။ ပစ္စည်းတစ်ခုဟာ အစိုင်အခဲ နဲ့ အရာ၀တ္ထုတွေရဲ့ အမှုန်တွေကို မကာကွယ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် ပထမဆုံး စာလုံးဟာ0ဖြစ်မှာပါ။ အစိုင်အခဲ နဲ့ အရာ၀တ္ထုတွေရဲ့ အမှုန်တွေကို ကာကွယ်‌ပေးနိုင်တဲ့ အဆင့်မပါခဲ့ဘူးဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ IP နောက်ကစာလုံးမှာ IPX4 သို့ IPX7 တို့လို0အစား X ကိုတွေ့ရမှာပါ။
အစိုင်အခဲတွေရဲ့ ၀င်ရောက်မှုကိုကာကွယ်‌ပေးနိုင်ခြင်းမှာ အဆင့် ၆ ဆင့်ရှိပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ Outdoor speakers တွေကို ကမ်းခြေမှာသာအသုံးပြုဖို့ ၀ယ်မယ်ဆိုရင် အဆင့် ၅ နဲ့ ၆ ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ IP နောက်က ပထမဆုံး နံပါတ်ဟာ5ဖြစ်ခဲ့ရင် Device ဟာ ဖုန်ဒဏ်ကိုခံနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖုန်တွေ၀င်ရောက်မှုကိုတော့ မခံနိုင်သေးပါဘူး။ အကယ်ရ၍ ဖုန်တွေဝင်သွားခဲ့ရင် ၀င်သွားခဲ့တဲ့ ဖုန်ရဲ့ပမာဏဟာ သင့် Device ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကို နှောက်ယှက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ IP နောက်က ပထမဆုံး နံပါတ်ဟာ6ဖြစ်ခဲ့ရင် Device သာ ဖုန်ဒဏ်ကိုသာမက ဖုန်တွေ၀င်ရောက်ခြင်းကို လုံး၀ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
IP rating ရဲ့နောက်က ဒုတိယ သင်္ကေတကတော့ ရေစိုနိုင်နိုင်တဲ့ အဆင့်ကို ဖော်ပြပေးပါတယ်။ တစ်ခုရှိတာက တစ်ခြားသောအရည်တွေ၀င်ရောက်မှုကို‌တော့ ခံနိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ သူ့မှာတော့ ရေစိုခံနိုင်တဲ့ အဆင့် ၉ ဆင့်ရှိပါတယ်။ Device တစ်ခုက ရေစိုခံနိုင်တဲ့ အဆင့်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် IP rating နောက်က ဒုတိယ သင်္ကေတ ဟာ0ဖြစ်ပြီး Device ဟာ ရေစိုခံမှုအတွက် မစမ်းသပ်ထားဘူးဆိုရင်0နေရာမှာ X နဲ့အစားထိုးလာမှာပါ။
ဥပမာ − IP68 သည် ဖုန်ဒဏ်နှင့် ဖုန်ဝင်ရောက်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး ရေစိုခံမှုမှာလည်း အဆင့် ၈ ထိရှိတဲ့ စံ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
တတိယ သင်္ကေတကတော့ Devices အားလုံးမှာ စမ်းသပ်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။ တတိယ သင်္ကေတထဲမှာ H ၊ S ၊ M ၊ F သို့မဟုတ် W စတဲ့ စာလုံးတွေရှိပါတယ်။ ထိုစာလုံးတွေမှာ မတူညီတဲ့ အခြေအနေတွေရှိပြီး Device ရဲ့ထူးခြားတဲ့ လက္ခဏာတွေကိုပေးပါတယ်။ H ဟာ High Voltage စံဖြစ်ပါတယ်၊ M ဆိုတာ Device တစ်ခုကို ရေထဲမှာ ရွေ့လျားပြီး စမ်းသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်၊ S ကတော့ Device ကို ရေထဲမှာအငြိမ်ထားပြီး စမ်းသပ်ခဲ့တာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်၊ W က ရာသီဥတုအခြေအနေ နဲ့ F ကတော့ Oil resistant တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
IPX Rating တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အဓိပ္ပာယ်
Water Resistance Rating ဟာ Outdoor speaker ၊ Sports headphones/earbuds ဒါမှမဟုတ်တစ်ခြားသော ရေစိုခံ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေ၀ယ်ရာမှာ အရေးပါဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း ရေစိုခံတံ့ အဆင့် ၉ ဆင့်ရှိတာဖြစ်လို့ ထိုအဆင့်တွေအကြောင်းကို ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ အခုရှင်းပြပေးမယ့် Rating တွေဂာ ဖုန်ဒဏ်ကို စမ်းသပ်ထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက် IP နောက်က ပထမဆုံး သင်္ကေတ ဟာ X ဖြစ်ပြီး ဒုတိယတစ်ခုကတော့ ရေစိုခံတဲ့အဆင့်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။
IPX1 – ရေစိုခံ အဆင့် ၁ ဆင့်ရှိတဲ့ Device ဟာရေစက်တွေ ထောင်လိုက်ကျနေတာကို 10 minutes အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။ ဒါမဲ့ ရေရဲ့ပမာဏကို ၁ မိနစ်မှာ 1 mm လောက်ထိပဲ ခံနိုင်ရည်ရှိတာပါ။
IPX2 – ရေစိုခံ အဆင့် ၁ ဆင့်ရှိတဲ့ Device ဟာ ရေစက်တွေကျတာကို 15 Degree ရှိတဲ့ ထောင့်ကနေ ခံနိုင်ပါတယ်။ ရေပမာဏကိုတော့ ၁ မိနစ်မှာ3mm လောက်ထိကို ထက်အေက်ဘယ်ညာ ကနေခံနိုင်ပါတယ်။
IPX3 – ရေစိုခံ အဆင့် ၃ ဆင့်ရှိတဲ့ Device ကတော့ ရေဖြန်းတာတွေကိုခံနိုင်ပါတယ်။ ရေတောင်မှာ Nozzle နဲ့ ၆၀ ဒီဂရီ ပတ်လည်ကနေ ပက်ဖြန်းခြင်းကို ခံနိုင်ပြီး ရေပမာဏကို ၅ မိနစ်မှာ 50 Liters ထိ ခံနိုင်ရည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
အခုအပိုင်းကပိုပြီး စိတ်၀င်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ Outdoor Speakers နဲ့ Sports headphones/earbuds အများစုမှာ IPX4 rating ပါရှိပြီး ရေစင်တာ ဖြန်းတာတွေကို ခံနိုင်ရည်ရှိကြပါတယ်။
IPX4 – ရေစိုခံ အဆင့် ၄ ဆင့်ရှိတဲ့ Device ဟာ ဘယ်နေရာကနေမဆို ရေစင်တာ ဖြန်းတာတွေကို ခံနိုင်ပါတယ်။ နာမည်ကြီးတဲ့ Speaker တွေကတော့ Bose Soundlink Revolve နဲ့ VTIN တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
IPX5 – ရေစိုခံ အဆင့် ၅ ဆင့်ရှိတဲ့ Device ဟာ 6.3mm ရှိတဲ့ ပိုက်ကနေထွက်လာတဲ့ရေကို 15 မိနစ်အထိခံနိုင်ပါတယ်။ ရေပမာဏကတော့ ၁ မိနစ်ကို 12.5 Liters ဖြစ်ပါတယ်။
IPX6 – ရေစိုခံ အဆင့် ၆ ဆင့်ရှိတဲ့ Device ဟာ 12.5mm ရှိတဲ့ ပိုက်ကနေထွက်လာတဲ့ရေပြင်းပြင်းကို3မိနစ်ခံနိုင်ပါတယ်။ ၁ မိနစ်ကို 100 Liters အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။
IPX7 – ရေစိုခံ အဆင့် ၇ ဆင့်ရှိတဲ့ Device ဟာ ရေအနက် 1 မီတာ ထဲမှာ ဘာထိခိုက်မှုမှ မရှိဘဲ မိနစ် 30 အထိခံနိုင်ပါတယ်။ IPX7 rating ရှိတဲ့ Devices တွေဟာ လုံး၀ရေစိုခံပါတယ်။ IPX7 rating ရှိတဲ့ Speakers/headphones တွေ အများအပြားရှိပါတယ်။ Popular ဖြစ်တဲ့ Speaker တွေကတော့ JBL Flip 4, JBL Charge3နဲ့ UE BOOM တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
IPX8 – ရေစိုခံ အဆင့် ၈ ဆင့်ရှိတဲ့ Device ဟာ ရေအနက်3မီတာမှာ နှစ်မြှုပ်နိုင်ပါတယ်။ ရေထဲမှာမြုပ်နိုင်တဲ့ကြာချိန်ကတော့ Device ကို ပြုလုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီအပေါ်မူတည်ပါတယ်။ သေချာတာကတော့ IPX7 rating ကကြာချိန်ထက် ပိုကြာနိုင်ပါတယ်။
IPX9K – ရေစိုခံ အဆင့် 9K ရှိတဲ့ Device ဟာ အားအလွန်ပြင်းတဲ့ ရေပိုက်ကထွက်တဲ့ ရေရဲ့ဒဏ်ကို ခံနိုင်ပါတယ်။ သူ့ကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက် ရေအပူချိန် (80°C/ 176°F) ရှိတဲ့ ရေကိုအသုံးပြုပြီး 0.1 – 0.15m ကနေ အနီးကပ် ပက်ဖြန်ပြီး စမ်းသပ်ပါတယ်။
ဈေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ Outdoor Speakers ၊ Sports headphones ၊ Earbuds တွေနဲ့ ရေစိုခံ စမတ်ဖုန်းအများစုမှာ IPX4 ၊ IPX5 ၊ IPX6 နဲ့ IPX7 ratings တွေရှိကြပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ IPX8 rating ရှိတဲ့ Earbuds ၊ Speakers နဲ့ ဖုန်း Covers တွေကို ဈေးကွက်ထဲမှာ တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ IPX9K ကတော့ Audio ပစ္စည်းတွေမှာ မ‌တွေ့ရပါဘူး။ သူ့ကိုတော့ တစ်ခြားသော Devices တွေအတွက်သာ သီးသန့်ထားထားပါတယ်။
Waterproof Speakers/Headphones/Earbuds တွေကို ၀ယ်ချိန်မှာဘာကိုကြည့်သင့်လဲ?
အခုစာဖတ်သူအနေနဲ့ IP/IPX rating ထဲမှာပါတဲ့ သင်္ကေတတွေကို သိ‌လောက်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ အဲ့လိုသိရင် ‌ရွေးဖို့သိပ်မခက်တော့ပါဘူး။ သင့် အနေနဲ့ Sports earbuds တစ်စုံကို ၀ယ်တော့မယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး IPX4 Rating ရှိတဲ့ Earbuds ကို၀ယ်သင့်ပါတယ်။ IPX4 rating ရှိတဲ့ Devices တွေဟာ ရေစင်တာကို ခံနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့သော ကုမ္ပဏီတွေကတော့ Headphones နဲ့ Earbuds တွေမှာ Sweat resistant (‌ချွေးစိုခံ) လို့သာ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ တကယ်က ‘’Sweat Resistant’’ လို့ဖော်ပြထားတဲ့ IP rating ဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ‘’Sweat Resistant’’ လို့‌ဖော်ပြထားတဲ့ ပစ္စည်းတွေဟာ အများအားဖြင့် ရေစင်တာခံတဲ့ (IPX4 certified) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အကောင်းဆုံး ကာကွယ်ပေးမှုလိုချင်ရင်တော့ လုံး၀ရေစိုခံတဲ့ IPX7 rating ဒါမှမဟုတ် ဖုန်ဒဏ်/ရေဒဏ်ကိုပါခံနိုင်တဲ့ IP67 rating ကို‌ရွေးချယ်၀ယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
စာကိုအဆုံးမသတ်ခင် အချက်နှစ်ချက် ပြောဖို့ကျန်နေပါသေးတယ်။ လုံးဝရေစိုခံပြီး ‌ရေအောက်မှာသုံးနိုင်တဲ့ IPX7 ဒါမှမဟုတ် IPX8 certified တွေဟာ IPX6 သို့မဟုတ် IPX5 certified မဖြစ်ပါဘူး။ IPX7 နဲ့ IPX8 devices တွေ အနေနဲ့ နောက်ထပ် IPX5 နဲ့ IPX6 rating စမ်းသပ်မှုကို ပြုလုပ်ရဦးမှာပါ။ တကယ်လို့ နှစ်မျိုးစလုံးစမ်းသပ်ထားရင် IPX rating မှာ IPX6/IPX8 ဆိုပြီးရေးထားတာကို တွေ့နိုင်မှာပါ။ နောက်ထပ် IP နဲ့ IPX ratings‌ တွေကို စစ်ရာမှာ သတိထားစေချင်ပါတယ်။ IP ဒါမှမဟုတ် IPX ကြားမှာ hyphen (-) ရှိနေရင် rating ဟာ အစစ်အမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါတာကြောင့်မို့ သင့်အနေနဲ့ IPX-7 ဒါမှမဟုတ် IP-68 ကို‌တွေ့တဲ့အခါ ထိုပစ္စည်းကို မယုံသင့်တော့ပါဘူး။ အဲ့တာဟာ တရား၀င်တဲ့ IP/IPX rating မဟုတ်လို့ပါ။ အဲ့တာက အမှားဖြစ်နိုင်ပေမယ့် သင့်အနေနဲ့ သတိထားသင့်ပါတယ်။
စာဖတ်သူအနေနဲ့ အခုလောက်ဆို IP နဲ့ IPX ratings အကြောင်းကို သိသင့်သလောက်ရှိလောက်ပါပြီ။ စာဖတ်သူအနေနဲ့ IP/IPX ratings နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးစရာရှိရင်မေးလို့ရပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်က ရေစိုခံ Flagship Phone ကိုင်တယ်ဆိုရင် ကိုသုံးတဲ့ ဖုန်းရဲ့ IP Rating က ဘယ်လောက်ရှိလဲ ဘယ်အနေအထားထိရှိမလဲဆိုတာ သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Huawei ရဲ့ မျိုးဆက်သစ် Kirin 1020 flagship SoC နဲ့ Kirin 820 တို့ရဲ့ ကောလဟလ သတင်းများ ‌ပေါ်ထွက်လာ
Snapdragon 865 SoC အသုံးပြုလာမယ့် Redmi K30 Pro ကို March 2020 မှာ မိတ်ဆက်လာမယ်။